Global Voices teny Malagasy » Hafainganam-pandehan’ny Aterineto Ho An’ny Rehetra!!!! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Desambra 2017 8:41 GMT 1	 · Mpanoratra Rosario Lizana Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Amerika Latina, Shily, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka
Mitebiteby fatratra ireo Shiliana blaogera mikasika ireo fahafaha-manao mety ho entin'ny aterineto haingam-pandeha ho an'ny fandrosoantsika. Manoratra eo amin'ny blaoginy i Alex Lagos hoe:
Herinandro lasa izay, nandefa lahatsoratra iray ny La Nación mikasika ny aterineto haingam-pandeha ao Shily. Ny tena zava-marina dia nisy fotoana efa renay ny resaka mikasika io olana io ary mbola gaga foana aho amin'ireo mpamatsy tolotra aterineto ISPs miasa ao Shily. Ny zavamisy dia tsy arahan'izy ireo akory izay voalazany any anatin'ireo dokambarotra. Manome koriana 128 kb ry zareo, nefa ny “hafainganam-pandeha avo indrindra amin'ny aterineto” sy ny fenitra iraisam-pirenena dia hoe lasa 1,5 hatramin'ny 2,0 Mbits ireny koriana ireny. Ahenan'izy ireo ihany koa ny hafainganana hifanaraka amin'ny fifamoivoizana (fomba iray io hanandramana ny fanarahamaso ny fifamoivoizana anaty tambajotra iray misy solosaina maromaro mba hanatsaràna sy hiantohana ny fiasany… saingy azo ampiasaina mba hamerana ny habetsahan'ny fifamoivoizana miainga amin'ny teboka iray mankany amin'ny iray hafa).
Mikasika io olana io, nandefa ireo karazana olany manokana momba ny fifandraisana ireo blaogera, ny hafainganam-pandeha sy ny olan'ireo orinasa tsy maneho ny tena zavamisy ara-teknika momba ny hafainganam-pandeha avo indrindra. Ohatra vitsivitsy ahitana an'i Yukei (ES), Huasonic(ES)  and FawerWayer.
Luis Ramirez, mandefa tafatafa iray niarahana tamina gazety, sady manampy ihany koa antsipirihany misimisy kokoa mikasika ilay olan'ny hafainganam-pandehan'ny aterineto. Faritany fa hafainganam-pandeha ara-tsosialy izy io, ary hadihadiany ireo fahafahana sy ireo mahatonga izany ho an'ireo orinasan-tserasera sy ny governemanta. Fijery iray dia izay nandraisan'ny governemanta andraikitra hentitra kokoa indray eo amin'ny fanarahamaso ny fahazoana korian'ireo olom-pirenena ny aterineto haingam-pandeha avy amin'ireo orinasa tsy miankina, toy izao hazavainy izao:
Raha jerena ny fihazakazaky ny fivoaran'ny teknolojia, toa lojika raha toa ny governemanta manao sonia fifanarahana miaraka amin'ireo orinasa tsy miankina, izay mpamatsy mahafatrapo indrindra ny aterineto, fa tsy hoe hanao fampiasambola goavana ho anà teknolojia iray manokana izay mety tsy ho fampiasa intsony ao anatin'ny roa na telo taona, toy ny fivoaran'ny fidirana aterineto avy amin'ny modem, mankamin'ny Wi-Fi sy ny WiMax” amin'izao fotoana izao.
Mikasika io olana io, atombok'i Atina Chile anio ny fanentanana mba hitakiana amin'ny governemanta ny fahazoana hafainganam-pandeha amin'ny vidiny mirary ho an'ny rehetra. Nanao fanambaràna iray izy ireo:
Koa satria tonga ny fotoana.
Koa satria tsy olana ara-teknika ny aterineto haingam-pandeha, olana ara-tsosialy io.
Koa satria mitovy dika amin'ny fahafahamanao sy fampandrosoana io.
Afaka mandroso i Shily.
Angamba mety ho mpilalao aminà ligy goavana eo amin'ny sehatra manerantany io.
Manana talenta hamorona tombonkarena amin'ny alalan'ireo akora fototra voajanahary ananany i Shily, nefa koa amin'ny alalan'ny fanaovana azy ho ambohipihaonana erantany ho an'ny teknolojia, ireo tolotrasa, sy ny famoronana kolontsaina indostrialy.
Manazava ny drafitr'izy ireo ihany koa izy ireo. Ny hevitra dia ny hihaonana ao amin'ny Kianja Ciudadania, eo anoloan'ny tranoben'ny governemanta fotsiny, antsoina hoe “La Moneda” amin'io Sabotsy io ary anaty- hetsika ampilaminana iray, hamaky ilay fanambaràna.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/31/112811/
 Yukei (ES), : http://www.yukei.net/2006/08/mi-horrible-experiencia-con-telefonica-chile/